Voodoo Kid: yegore ra1997 iro rinodzokera zvakare kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Voodoo mwana Yakave zvakare yakaburitswa yeLinux ine emulator Boxedwine. Icho chiitiko chekare kubva muna 1997, chakaburitswa neiyo Infogrames studio uye iyo yaive yekunongedzera nekudzvanya munzvimbo dzakasiyana nezvinhu zvekudyidzana nazvo. Zvino, iyi yakajeka graphic yatangwazve, ichisvika muna Kubvumbi 2021 kune imwe chikuva uye ikozvino zvakare paGNU / Linux.
Voodoo Kid ingangove isingazivikanwe nevakawanda, uye kunyangwe mumakore gumi iwayo ingangodaro yaive mutambo wevhidhiyo uyo usina kucherechedzwa nevatambi. Iyo ine zvayakanakira zvayo hazvo, uye ikozvino yamutsidzirwa kune vanoda mutambo. retro kana zvekare uye kuratidza kuti ibwe.
Yakanga yatoziviswa kanguva kapfuura, neDhijitorioriori, kuti ichauya, asi iyi vhezheni vhezheni inoshandisa yakasarudzika software inonzi Boxedwine, emulator inomhanya neWindows application uye iri padyo neDOSBox kupfuura chero chinhu chipi zvacho, ichiunza isingazivikanwe 32-bit vhezheni yeWINE uye kuteedzera iyo Linux kernel uye CPU. Kutenda kuBhokisiedwine unogona kumhanyisa mazita ekare emitambo yemavhidhiyo, senge Voodoo Kid, inozvarwa kuMicrosoft Windows munzvimbo dzakadai seLinux, macOS, nezvimwe.
Kana zviri zvemutambo Voodoo Kid, icho chiitiko mune iyo a mukomana anonzi Kid, zvinoita kunge zvakajairika, uyo anorara achiverenga bhuku uye paanomuka anozviwana ari ega uye musungwa munyika ine hukasha uye inoshamisa apo iye ari mambo weZombies, tenzi wevodoo uye ishe wenguva yemberi isina kugadzikana yemwana murombo kana hapana zvaanoita.
Tichafanira kuongorora, kugadzirisa matambudziko uye kurwa. Uye kana pasina chimwe cheicho chinoshanda, mhanya! Ichokwadi kuburitsa mafaro uye kutyisa, pamwe nekuisa pfungwa dzako kumuyedzo nezvirahwe kana bvunzo kusimudzira yako fungidziro. Nenzvimbo inonakidza uye yakapfava yemutambo kuitira kuti iwe unongonetseka nezve poindi uye tinya ...
Mamwe ruzivo nezve Voodoo Kid uye kutenga - Chitoro online chitoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Voodoo Kid: yegore ra1997 iro rinodzokera zvakare kuLinux